जेठ ८, काठमाडौं । मङ्गलवार नेप्से शून्य दशमलव ३२ प्रतिशत घटेर बन्द भएको छ । कारोबार भएको एक घण्टामा बजार उतारचढावमा रहेको थियो । त्यसपछि निरन्तर ओरालो लागेको बजार अन्त्यमा ४ दशमलव ३१ अङ्कले घटेर १ हजार ३ सय ३२ दशमलव ८२ विन्दुमा पुगेको छ ।
नेप्सेमा सर्वाधिक शेयर कारोबार हुने १० कम्पनीमा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैङ्कको संस्थापक शेयर रहेको छ । यस कम्पनीको प्रतिकित्ता रू. ५ सय ७० मा रू. २२ करोडको २४ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । यस दिन यस कम्पनीको उच्च कारोबार भएको छ ।
कारोबार भएका नौ समूहको परिसूचकमा लघुवित्त, उत्पादन तथा प्रशोधन समूह र होटल समूहको परिसूचक बढेको भएता पनि बाँकी समूहको परिसूचक घटेपछि नेप्से परिसूचक घटेको हो । कारोबार भएका १ सय ६० कम्पनीको ३ हजार ८ सय ८३ पटकको व्यापारमा १० लाख ५८ हजार ७५ कित्ता शेयरको रू. ५३ करोड ८३ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । यस दिनको म्यानुअल कारोबार रू. १९ लाख ३० हजार रहेको छ ।
कारोबार भएका कम्पनी मध्ये सूर्योदय लघुवित्तको शेयर मूल्य करीब १० प्रतिशत र किसान माइक्रोफाइनान्सको शेयर मूल्य ८ दशमलव ४१ प्रतिशतले बढेको छ । साथै, सेण्ट्रल फाइनान्सको शेयर मूल्य ६ दशमलव २५ प्रतिशतले घटेको छ ।
बजेटको पर्खाईमा लगानीकर्ता जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गर्न लागेको आगामी आवको बजेटको पर्खाईमा रहेको लगानीकर्ता बताउँछन् । उक्त बजेट पूँजीबजार पूर्वाधारमैत्री हुने आशा लगानीकर्ताले गरेका छन् । शेयर बजारमा ५ प्रतिशत कर तोकियोस् र दीर्घकालीन लगानीकर्ताहरुको लागि शेयर किनबेचमा साढे २ प्रतिशत कर लागू गरियोस् भन्ने उनिहरुको धारणा छ ।